Flu teas: Dzvanya apa uye uwane akanakisa iwo!
Peanut butter: kukora kana kurasikirwa uremu? Unogona here kudya pane chikafu?
Tea dzekushushikana: Pedza uipi uhu zvachose uye zvachose!
utano	 24 August 2016
Flu Teas: Ona iwo akanakisa mabikirwo!
Tsvaga pano akanakisa miriwo uye tii inosanganiswa kubatsira nezviratidzo zvechirwere. Ona izvi zvese uye nezvimwe zvinotevera!
Matsutso uye nguva yechando ndiyo mwaka ine shanduko dzemamiriro ekunze dzinongoerekana dzaitika, hunyoro hwemhepo nemvura, zvichidaro zvichiunza hutachiona hwakawanda uye hutachiona uye hunotyisa nefuruu. Inozivikanwa sehutachiona hwefuruwenza, dzihwa rinouya nezviratidzo zvinoverengeka zvinogona kukanganisa hupenyu hwako kwemazuva akati wandei kana vhiki.
Hosha yakawanda, kupisa muviri, kukosora, kukwenya huro, kubuda mhino, kubuda, kutonhora dikita, kusagadzikana uye kupfava mumuviri, zvese izvi zviratidzo zvinozivikanwa kune avo vane furuwenza uye unogona kubatsira kurwa navo nefuru tii. Chiyero chakareruka chemushonga wechisikigo chaunogona kuzvigadzirira uri kumba kana kubasa nekuvandudza zuva rako uye nemanzwiro ako.
Flu tii yakachipa, haufanire kushandisa mari yese iyoyo kukhemisi uye ivo vanovandudzawo kugara kwako uye zviratidzo uye hazvingakuite iwe uve nehope senge echinyakare mishonga yekurapa.
Flu tii inonzwika senge mhinduro hombe, handizvo here? Uye ndizvo zvazviri! Nezvo izvo mupfungwa isu takatsvaga ndokugadzira sarudzo yemhando dzakanakisa dzefuru iwe. Nyora pasi aya matipi uye maitiro ekuzviita.
Flu Tea Mapoka
Lemon, ginger uye gariki tii
Tea yatove kuzivikanwa nekurapa kwavo, ndimu ine vhitamini C yakawanda uye ine expectorant, ginger ine zvivakwa zvekubvisa huro yako negariki zvinobatsira kurwisa hutachiona. Bikai makapu maviri emvura nemakaravha matatu echinhu chakatemwa, rega chimbobika kwemaminitsi mashanu, dzima moto uye wobva wawedzera zvimedu zvemurimu uye rega zvinyuruke kwemaminetsi gumi. Mushure maizvozvo, svinura tii yako uye unwe kaviri pazuva.
Shandisa maruva maruva chete nekuti mashizha ane chepfu. Iwe unogona kuwana ichi chinongedzo muzvitoro zvine hunyanzvi mune zvigadzirwa zvechisikigo. Uyai nemukombe wemvura kumota, dzima moto uye wedzera chipunu chemaruva eruzevha, rega chinyurure kwemaminitsi gumi wobva wanwa tii yako.
Eucalyptus, mint uye rosemary tii
Zvinhu zvitatu zvine simba uye zvine simba zvinopesana nefuru. Birai makapu maviri emvura pamwechete nemashizha maviri eucalyptus, matatu mindi mashizha uye sprig yerosemary kwemaminitsi matatu. Bvisa moto uye usiye tii yako yakavharwa kweimwe maminitsi gumi. Ichave yakagadzirira kunwa.
Lemon, uchi uye ginger tii
Uku kupfura uye kudonha! Kunze kwekuve unonaka tii, iwe unogona pakupedzisira kuitapira neuchi, iyo ine akawanda mavitamini uye inonyorova mucosa. Kwehafu yetita yemvura, wirisa pamwe chete zvimedu zvemoni imwechete, maorenji matatu uye chimedu cheginki che3 cm chakachekwa kwemaminitsi mashanu. Mushure mekudzima moto, wedzera majusi erimu rakasvinwa nemaorenji tii, itapira neuchi uye unwe kusvika pamikombe mitatu pazuva.
Kana zviratidzo zvechirwere zvichiramba zvaunofanira kuita kuona chiremba uye kutora kurapwa kwenguva yakareba kuti ubvise hutachiona.
Tinovimba makafarira matipi anhasi. Iwe unoziva chero imwe chaiyo tii yakanaka yekumwa panguva yefuru mwaka? Goverana nesu mumashoko!
Kiwi: Ndeapi mabhenefiti? Kwakanyanya caloric? Mhando dzipi?
Kugadziriswa kweCapillary: Chii ichocho? Ona mapepa ekugadzirira!
Ndimu mvura inotsvedza, inomhanyisa metabolism, inobvisa chepfu uye nezvimwe zvakawanda. Dzidza zvese pano!
Vitamin C: Chii ichochi? Zvakanakirei? Buda!
Kudya Kwemvura: Zvakakosha Kuita Here? Chaizvoizvo zvinoshanda?